Mucjisadii kubada miiska Mr Magan oo lagu sameeyay qaliinkii ugu xumaa intii uu ciyaarah ku soo jiray.
Mucjisadii kubada Miiska waa Mr Magan Dahir Yusuf ayaa ka nasan doona cayaaraha kubada miiska mudo 6 bilood ah , kadib markii lagu sameeyay qaliin xaga jilibka .
Sidaan ula wada soconaba akhristoow waxaa baryahanba dhawaacna- Mr Magan oo uu dhaawacaasi ka soo gaaray mar uu ka ciyaarayay wadanka Slovenia mudo hada laga joogo 3 bilood.
Kadib markii dhakhtarkiisa iyo waliba dhakhaatiirtii ka socotay kooxda qaranka ee dalka Nederlaand ay go-aansadeen in uu Mr- Magan waa mucjisadii kubada miiskee in lagu sameeyo qaliin dagdag ah , si uu si dhakhsa ah uu ciyaaraha kubada miiska uu dib ugu soo laabto.
Qaliinkan, Mr Magan lagu sameeyay waxa uu runtii qaatay mudo laba maalmood ah , waxaanu uu ahaa qaliin runtii aad iyo aad u -naxdin badan , lakiin waxaad ka dhadhansanaysay Mr Magan in uu ilaahay iyo naftiisaba uu ku kalsoon yahay , jecelyahayna in uu si dhekhso ah uu ciyaaraha kubada miiska dib uu ugu soo noqon doono.
Akristoow waxaa hadaba dhamaan shacabwaynaha Somaliyeed ee xiiseeya cayaaraha noocuu doonaba ha ahaadee ay uga xumaadeen qaliinkaas lagu sameeyay Mr Magan. Waxayna ilaahay uga baryayaan in uu u fududeeyo qaliinkiisa ah xaga jilibka ah .
Waxaa akhristoow iyagana sidaas oo kale u soo duceeynaya dhamaan warbaahiyayaasha xiiseeya cayaaryahankeena qaaliga ah , habeen iyo maalina u soo jeeda in ay u soo bandhigaan horumarka uu Mr Magan ka gaaray cayaaraha kubada miiska.
Waxaa hadaba mahadaas leh dhamaan umada Somaliyeed ee xiiseeya ciyaaraha.